တစ်နေ့မှာ မနက်စာဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲ လူသုံးယောက်ဝင်လာပြီး မနက်စာမှာတယ်။
ပထမဧည့်သည်----- ကြက်ဥဟတ်ဘွိုင်တစ်လုံး အနှစ်မယူဘူး!
ဂျီးများတဲ့ဧည့်သည်အသံကြားတော့ ဆိုင်ရှင်စိတ်နည်းနည်း ထောင့်သွားပြီး စိတ်ထဲမှာလည်း "ဟင်း.. ဒီလို ဂျီးများတဲ့လူလည်း ရှိသေးတယ်"လို့ တွေးမိတယ်။
ဒုတိယဧည့်သည်---- ကြက်ဥဟတ်ဘွိုင်တစ်လုံး အကာမယူဘူး!
"တောက်... ဒီခေတ်လူငယ်တွေ တော်တော်ဂျီးများပါလား!"
အဲလိုနဲ့ ဆိုင်ရှင်ဟာ ဒေါသထွက်ထွက်နဲ့ တတိယဧည့်သည်ကို မေးတယ်။
"ဟေး... မင်းကရော.. ဘာယူမှာလဲ!"
တတိယဧည့်သည်က ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ "ကျ.. ကျ.. ကျွန်တော်အတွက်... ကြက်.. ကြက်ဥဟတ်ဘွိုင်တစ်လုံး အခွံမယူဘူး" လို့ ဖြေလိုက်တယ်။
ရေချိုးခန်းထဲမှာ လူစီရေချိုးနေတယ်။ ဂျင်မီက အဝတ်အစားတွေလဲရင်း "သူ့ကိုငါ ဘယ်လိုပြောရမလဲ! ငါ့ခြေထောက်က ကမ္ဘာပေါ်မှာအနံဆုံးဆိုတာကို ငါရဲ့သတိုးသမီးကို ငါဘယ်လိုပြောပြရင် ကောင်းမလဲ?" လို့တွေးနေတယ်။
အဲဒီနောက် ဂျင်မီက ခြေအိတ်ကိုချွတ်ပြီး ကုတင်အောက် ပစ်ထည့်လိုက်တယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ ရေချိုးခန်းထဲက လူစီထွက်လာတယ်။ လူစီကို မျက်နှာချင်းမဆိုင်ရဲတဲ့ဂျင်မီဟာ ရေချိုးခန်းထဲ ပြေးဝင်သွားတယ်။ အဲဒီမှာ လူစီကလည်း ကုတင်ခြေရင်းမှာထိုင်ပြီး "သူ့ကို ငါဘယ်လိုပြောပြရမလဲ? ငါ့ပါးစပ်က ကမ္ဘာပေါ်မှာ အနံ့အဆိုးဆုံးဆိုတာကို ငါရဲ့သတိုးသားကို ငါဘယ်လို ပြောပြရင်ကောင်းမလဲ" လို့ တွေးနေတယ်။
အဲဒီမှာ ရေချိုးခန်းထဲကနေ ဂျင်မီထွက်လာတယ်။ လူစီကပြေးပြီး ဂျင်မီကိုတစ်ချက်နမ်းလိုက်တယ်။ ပြီးတော့... "နင့်ကို ငါပြောစရာရှိတယ် ဂျင်မီရယ်" လို့ဆိုတော့ ဂျင်မီက လက်ကာပြီးပြောလိုက်တယ်။
"ငါ သိတယ် .. ငါသိတယ်.. နင် ငါ့ခြေအိတ်ကိုစားလိုက်တယ်ဆိုတာ ငါသိတယ်" ဟူတည်း။
အားလုံးပြုံးရယ်ဖို့ ဖတ်မိတာလေး ဘာသာပြန်မျှဝေပါတယ်....
ရေးသားသူ... နိုင်းနိုင်းစနေ at 12:32:00 AM2comments
တစ်ခါက ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ အမျိုးသမီး၎ဦးဆုံတော့ ကိုယ့်အကြောင်း သူ့အကြောင်း စကားစမြည်ပြောကြတယ်။ ပြောရင်းပြောရင်း ကိုယ့်သားသမီးအကြောင်းရောက်တော့...
ပထမ အမျိုးသမီးက " ကျွန်မသားက Priest (ဘုန်းတော်ကြီး)လေ။ ဟောခန်းထဲဝင်တာနဲ့ လူတွေက သူ့ကို "Father" လို့ခေါ်ကြတယ်"လို့ပြောတယ်။
အဲဒီမှာ ဒုတိယအမျိုးသမီးကလည်း အားကျမခံ "ကျွန်မသားက Bishop(ဂိုဏ်းချုပ်)လေ။ ဟောခန်းထဲဝင်တာနဲ့ လူတွေက သူ့ကို " Your Grace" လို့ ခေါ်ကြတယ်"
တတိယအမျိုးသမီးကလည်း အားကျမခံ "ကျွန်မသားက Cardinal (ဝတ်ရုံနီဘုန်းတော်ကြီး)လေ။ ဟောခန်းထဲဝင်တာနဲ့ လူတွေက သူ့ကို "Your Eminence" လို့ ခေါ်ကြတယ်"
အမျိုးသမီးသုံးဦးရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီး စတုတ္ထအမျိုးသမီးက "ကျွန်မသားက အရပ်၆ပေကျော်မြင့်တယ်၊ ရင်ဘတ်နှစ်ဘက်မှာ ကြွက်သားနဲ့၊ တင်ကောက်ကောက်၊ တောင့်တောင့် ခန့်ခန့်ချောချောပဲ။ ဟောခန်းထဲ သူဝင်တာနဲ့ ရှိသမျှမိန်းကလေးတွေက "Oh! My God" လို့ အော်ကြတယ်" လို့ ဖြေးဖြေးသာသာ ပြောလိုက်ပါတယ်။
အားလုံးပြုံးရယ်ဖို့ ဖတ်မိတာလေး ဘာသာပြန်မျှဝေပါတယ်...
ရေးသားသူ... နိုင်းနိုင်းစနေ at 2:50:00 AM7comments
အမေနဲ့သမီး ရေကူးကန်မှာ ရေသွားကူးတယ်။ ရေကူးဖို့ သမီးရေကန်ထဲခုန်ချချိန် ရေကူးဝတ်စုံ မတော်တဆ ချုပ်ရိုးကွဲသွားတယ်။ ဒါကို အမေက ရေကူးကန်ဘေးမှာ ထောင်ထားတဲ့ဆိုင်းပုဒ်ကို အမြန်ယူပြီး ကွယ်ပေးလိုက်တယ်။ ဆိုင်းပုဒ်ပေါ်မှာရေးထားတဲ့ "အန္တရာယ်ရှိသည်။ အနက် ၂မီတာ ကျွမ်းကျင်သူများသာ" ဆိုတဲ့စာကြောင့် လူတွေပြုံးစိစိဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ ဒါကိုအမေတွေ့တော့ ဆိုင်းပုဒ်ကို တစ်ဖက်အမြန်လှည့်လိုက်တယ်။ ဆိုင်းပုဒ်နောက်မှာ ရေးထားတာက "အမျိုးသားသီးသန့်၊ အထဲမဝင်ခင် အကျီင်္ချွတ်ပါ" ဆိုတာဖြစ်တယ်။
ကယောင်ကတမ်းနဲ့အမေ နောက်ဆိုင်းပုဒ်တစ်ခုယူပြီး သမီးကိုကွယ်ပေးလိုက်တယ်။ ဆိုင်းပုဒ်ပေါ်က "လူကြီး ၁ဝဝ၊ ကလေး ၅ဝ၊ အယောက်၂ဝအထက် အထူးလျော့ဈေး" ဆိုတဲ့စာကြောင့် လူတွေ ရယ်ကျဲကျဲဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ နောက်ဆိုင်းပုဒ်တစ်ခုကို အမေ ယူလိုက်တယ်။ အဲဒီဆိုင်းပုဒ်ကြောင့် အမေ မူးလဲမတတ်ဖြစ်သွားတယ်။ ဆိုင်းပုဒ်ပေါ်ရေးထားတာက "မနက်၉နာရီမှ ည၁ဝနာရီထိ၊ အများသုံးနေရာဖြစ်သောကြောင့် သန့်ရှင်းမှုကို ဦးစားပေးပါ" ဆိုတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။
လူတွေ ရယ်ကျဲကျဲဖြစ်ကုန်တာကြောင့် အမေ နောက်ဆိုင်းပုဒ်တစ်ခုကို ယူလိုက်ပြန်တယ်။ ဒီဆိုင်းပုဒ်ကြောင့် အမေမူးလဲသွားတယ်။ လူတွေ ဝါးလုံးကွဲရယ်ကြတော့တယ်။ ဆိုင်းပုဒ်ပေါ်မှာ ရေးထားတာက "အမွေးအမျှင်များ ပိတ်ဆို့မှုမဖြစ်စေရန်၊ နောက်လူများ အသုံးပြုအဆင်ပြေစေရန်၊ အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း ဦးထုပ်ဆောင်းပါ" ဆိုတာပဲဖြစ်တယ်။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရယ်ရုံသက်သက်မျှသာ.. ဖတ်ဖူးတာကို ဘာသာပြန်မျှဝေပါသည်။
ရေးသားသူ... နိုင်းနိုင်းစနေ at 9:23:00 PM 10 comments
ဂျပန်ငလျင်ကြောင့် နျူကလီးယား ဓါတ်ပေါင်းဖိုပေါက်ကွဲတော့ တရုတ်ပြည်နေရာအများမှာ "ဆား"လုပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဆားထဲပါတဲ့ အိုင်အိုဒင်းဓာတ်က နျူကလီးယားအန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ဖြစ်တယ်။ ဆားလုပွဲအကြောင်းကို တရုတ်ပြည်သူတချို့က လှောင်ပြောင်ရှုတ်ချပြီး အခုလို အင်တာနက်ပေါ်မှာ "ဆား"အကြောင်းတွေကို ဟာသလို၊ ပုံပြင်လို၊ သံချပ်လိုအမျိုးမျိုးနဲ့ ကဲ့ရဲ့ဝေဖန်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီထဲက ဟာသတချို့ကို ဘာသာပြန်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့ ဂျပန်တွေက တရုတ်တွေ ဆားလုတာကိုတွေ့လို့ ရယ်လိုက်တာအူတက်ပြီး တချို့သေပြန်တယ်။
ဂျပန်ငလျင်ပြီးနောက် လူ၃ယောက်သေပြီး နတ်ပြည်ရောက်သွားခဲ့တယ်။ အဲဒီလူတွေက ဂျပန်၊ ကိုးရီးယားနဲ့ တရုတ်တို့ဖြစ်တယ်။ သူတို့၃ယောက်ကို နတ်မင်းကြီးက မေးတယ်။
ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ ပထမဆုံးအကြိမ် ချစ်သူနဲ့ချိန်းတွေ့မှာမို့ စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်။ ချစ်သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါ ဘာပြောရမှန်းလဲ မသိခဲ့ဘူး။ အဲဒီလိုနဲ့ ဖခင်ဆီ သူအကြံတောင်းတယ်။ ဖခင်က "သား.. အကြောင်းအရာ ၃မျိုးက ဒီလိုနေရာမျိုးနဲ့ သင့်တော်တယ်။ အဲဒီအကြောင်းအရာ ၃မျိုးက အစားအသောက်၊ မိသားစု၊ အတွေးစကားလေးတွေပေါ့" လို့မှာတယ်။
ကောင်လေးက သူ့ဖခင်စကားကိုမှတ်ပြီး ချစ်သူနဲ့သွားချိန်းခဲ့တယ်။ ရေခဲမုန့်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြတ်တော့ နှစ်ယောက်သား ရေခဲမုန့်ဝယ်စားကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချိန်တွေတဖြေးဖြေး ကုန်လာသည့်တိုင် နှစ်ယောက်သား ပြောစရာစကားမရှိသေးတော့ ကောင်လေး ပိုပိုစိတ်လှုပ်ရှားလာမိတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ဖခင်ရဲ့အကြံကို သူသတိရလိုက်ပြီး ချစ်သူကို မေးတယ်။
အဲဒီနောက် တိတ်ဆိတ်သွားပြန်တယ်။ မိနစ်အနည်းငယ် ကြာတော့ ကောင်လေးက ဒုတိယအကြောင်းအရာ မိသားစုကို ထုတ်သုံးတယ်။
ဆက်ပြောစရာစကားမရှိဘဲ တိတ်ဆိတ်သွားပြန်တယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတော့ ကောင်လေးက သူ့ဖခင်ပြောတဲ့ တတိယအကြောင်းအရာ အတွေးစကားကို ထုတ်သုံးပြီး ချစ်သူကို မေးလိုက်တယ်။
"တကယ်လို့ နင့်မှာ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ ရှိရင် သူတို့အာလူးကြော်ကြိုက်လိမ့်မယ်လို့ နင်ထင်လားဟင်?"
မေမေက မိစုကို ဂီတပွဲခေါ်သွားတယ်။ ဂီတပွဲစင်မြင့်ပေါ်က တုတ်တံလေးကိုင်ပြီး ဟိုရမ်းဒီရမ်းလုပ်နေတဲ့လူကို မိစုအရမ်း စိတ်ဝင်စားမိတယ်။ တုတ်တံရမ်းနေတဲ့လူကိုကြည့်လိုက် အသံမြင့်သီချင်းဆိုတဲ့ အဆိုတော်ကိုကြည့်လိုက်နဲ့ မိစု ခေါင်းထဲ မေးခွန်းတချို့ဝင်လာတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ပွဲပြီးတော့ မေမေကို မိစုမေးတယ်။
"မေမေ... မေမေ... စင်မြင့်ပေါ်က ဟိုဦးဦးက တုတ်ကိုင်ပြီး ဘာဖြစ်လို့ ဟိုဒေါ်ဒေါ်အဆိုတော်ကို ခြိမ်းခြောက်နေရတာလဲ?"
အင်တာနက်ပေါ်က ဟာသတချို့ကို ဘာသာပြန်မျှဝေပါတယ်။
ရေးသားသူ... နိုင်းနိုင်းစနေ at 3:34:00 AM4comments
ရေးသားသူ... နိုင်းနိုင်းစနေ at 3:38:00 PM4comments
"မင်္ဂလာပါရှင်... ဖုန်းကိုင်မည့်သူမရှိပါသောကြောင့် "ပိ"သံကြားပြီးနောက် သင့်မက်ဆေ့ကိုချန်ထားခဲ့ပါ"
အကယ်၍ သင်ဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ သားသမီးဖြစ်ပါက နံပါတ် ၁ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးနောက် သင်ထားခဲ့ချင်သော မက်ဆေ့ကို ၁ မှ ၈ အတွင်းနှိပ်ပြီး ရွေးပါ။
အကယ်၍ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ထမင်းလာစားမယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ထမင်းဟင်းချက်ပို့ရမယ်ဆိုရင် ၆ ကိုနှိပ်ပါ။
အကယ်၍ ကျွန်မတို့ကို ထမင်းဖိတ်ကျွေးဖို့ ဒါမှမဟုတ် ရုပ်ရှင်လိုက်ပြဖို့ဆိုရင် စကားပြောပါ။ ကျွန်မတို့ နားထောင်နေပါတယ်....
အသစ်ဖွင့်တဲ့သင်တန်းတစ်ခုမှာ အဘိုးအိုတစ်ဦးသွားတက်ခဲ့တယ်။ ဒါကို တတိယတန်းတက်နေတဲ့ ကလေးငယ်တစ်ယောက်က အဘိုးအိုကို "ဘိုးဘိုး.. ဘိုးဘိုး.. ဘိုးဘိုး အသက်ဒီလောက်ကြီးနေပြီ သင်တန်းလာတက်တုန်းလား?" လို့မေးလိုက်တယ်။
"ပညာလို အိုသည်မရှိတဲ့ ငါ့မြေးရဲ့.. ဘိုးဘိုးဒီလောက်အသက်ကြီးတာတောင် ပညာလိုသေးတယ်။ ငါ့မြေး ပိုကြိုးစားရမယ်နော်"
"အင်း..... ဘိုးဘိုးပြောတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်လို့ ကျောင်းက အုပ်ထိန်းသူခေါ်ခဲ့လို့ပြောရင် ဘိုးဘိုးဘယ်သူ့ကို ခေါ်မလဲဟင်!"
စကပ်တိုတိုဝတ်ထားတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် အဝတ်လျှော်ဆိုင်မှာ အဝတ်သွားလျှော်တယ်။ အဝတ်လျှော်ဆိုင်ကသူဌေး သူ့စကပ်ကိုပဲ လိုက်ငေးကြည့်နေလို့ ကောင်မလေးဟာ စိတ်တိုတိုနဲ့ ဘာကြည့်တာလဲလို့ မေးလိုက်တယ်။ သူဌေးက နားမလည်ဟန်နဲ့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
တစ်နေ့မှာ မြွေနှစ်ကောင် မျက်နှာချင်းဆိုင်မိကြတယ်။ မြွေငယ်က မြွေကြီးကို မေးတယ်။
"ကိုကြီး.. ကိုကြီး... ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်ပေါ်မှာ အဆိပ်ရှိလား!"
"မင်း.. မေးစရာမရှိ လျှောက်မေးနေတာ ဘာလို့လဲ?"
"ခုနားက ကျွန်တော်သတိမထားမိဘဲ ကိုယ့်လျှာကိုယ် ကိုက်လိုက်မိလို့ပါ ကိုကြီး"
တွေးတွေးပြီး ရယ်ရအောင် အင်တာနက်ပေါ်က ရှာဖွေဘာသာပြန်ပါသည်။
ရေးသားသူ... နိုင်းနိုင်းစနေ at 3:02:00 AM6comments
ရေးသားသူ... နိုင်းနိုင်းစနေ at 12:50:00 AM 8 comments
Labels: ဟာသ, အမေ
Posted by minthantzaww at 22:39